Deni oo ka qeyb galaya doorashada …
Magaalada Caasimadda ah ee Gobolka waxaa lagu qabanayaa shir looga hadlayey doorashada la filayo inay dhaceyso dhamaadka sanadka 2020 ilaa bilowga sanadka soo socda 2021 iyo xilliga kala guurka.
Dood-wadaag ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweynaha Dawlad-gobaleedka Puntland Saciid C / llaahi Deni, Madaxweynayaashii hore C / weli Maxamed Cali Gaas, Senator C / raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole, Wasiir ku xigeenka Golaha Wakiilada, xildhibaano, siyaasiyiin iyo xubno kale.
Kani waa shirkii afaraad ee doorashada Soomaaliya iyo dowladaha ku meel gaarka ah, maadaama la sameeyay xildhibaano, Senatarro, Af-hayeenno, Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Xiriirka ka dhexeeya Xukumadda Federaalka iyo Dowlad-gobaleedka Puntland ma ahan mid wanaagsan, inta lagu gudajiray sanadka iyo dhowr bilood oo uu xafiiska joogay Saciid C / llaahi Deni.
Gobollada ayaa si toos ah ugu magacaabi doona senatorada aqalka sare, halka baarlamaanka loo dooran doono deegaanno ay ka mid yihiin Benaadir, Hir-Shabeelle, Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo baarlamaanka Gobaladda Waqooyi ee ku sugan Muqdisho.
Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka ayaa ku adkaysanaya in waddanku qabanayo doorasho hal-hal ah, marka laga reebo arrimo dhawr ah oo ay ka mid yihiin amniga, dhaqaalaha, iyo infekshanka Covid-19.
Dhamaadka May, guddiga doorashadu wuxuu hortagi doonaa labada gole ee BFS si ay ula wadaagaan nooca doorashada ka dhaceysa dalka, guulaha ay gaareen iyo talaabada ugu dambeysa ee howshiisa.